Wararka - Hordhaca xirmooyinka qalliinka ee la tuuro
Hordhaca Xirmooyinka Qalliinka La Tuuro
Xirmooyinka qalliinka ee la tuuro badiyaa waxay ka kooban yihiin bacaha maro waaweyn, gogosha qalliinka iyo bacaha Meiya, iyo qalabka kale ee qalliinka ayaa lagu dari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha qalliinka. Dharka qalliinka waa udub dhexaadka xirmada qalliinka oo dhan. Sida laga soo xigtay sannado badan oo waayo -aragnimo caafimaad oo shisheeye ah, fikradda naqshadeynta iyo habka wax -soo -saarka ee xirmada qalliinka ayaa aad ugu habboon baahiyaha dhabta ah ee qalliinka, oo si waxtar leh u ilaaliya bukaannada iyo shaqaalaha caafimaadka. Sifooyinkeeda ugu weyni waa iska caabin biyo oo aad u fiican (dhar aan dun lahayn oo aan biyuhu lahayn), waxqabadka nuugista biyaha oo wanaagsan (maro-biyo-nuugis ah oo aan lahayn tolmo wanaagsan), cadaadis sare oo sarreeya, dabacsanaan wanaagsan, dabacsanaan, dhejisyo dibadda laga keenay (xasaasiyad la'aan), iska caabin khamri, Anti- plasma, anti-oil iyo faa'iidooyin kale.
Tusaale ahaan, xirmada qalliinka addinka hoose
Qaabeynta ugu weyn waxaa ka mid ah daloolka qaliinka ee xubinta hoose, dalool, bacda Meiya, maro weyn, daboolka cagta, cajalad iwm.
Muraayadaha qalliinka ee darafyada hoose ayaa loo adeegsadaa addimada hoose ee bukaanka si loo sameeyo aag madhalays ah oo qaliin ah si looga hortago is-qaadsiinta u dhaxaysa shaqaalaha caafimaadka iyo bukaannada; daahyada waaweyn waxaa loo isticmaali karaa hal dabool oo waxay ku faafi karaan madal aaladda qalliinka, mararka qaarkood waxay daboolaan bukaanka.
Sidoo kale baakadaha caafimaadku waa inay doortaan qalabka baakadaha habboon iyo hababka baakadaha. Habka baakadu kuma xirna oo kaliya habka jeermis -diidka, laakiin waxay kaloo tixgelinaysaa walxaha jeermis -diidka ah. Cilmi -baaris badan ayaa arrintan laga sameeyay, iyo noocyo badan oo ah qalabka baakadaha caafimaadka ayaa sidoo kale laga heli karaa suuqa.
Fahamka habka jeermis -diidka iyo shuruudaha baakadaha ayaa naga caawin kara inaan gaarno go'aanka saxda ah markaan dooraneyno qalabka baakadaha. Kaliya qalabka wax lagu duubo oo si gaar ah loogu talagalay madhalays oo ay ansixisay FDA ayaa la isticmaali karaa.
Maaddada baakadaha jeermis-dileynta cadaadiska waa inay awood u yeelataa inay u adkeyso heerkulka sare ee 121 ℃ -135 ℃, dheecaanka hawada, gelinta uumiga biyaha iyo qalajinta alaabta baakadaha iyo waxa ku jira;
Jeermiska oksaydh -ka -samayska Agabka baakaduhu waa inuu oggolaadaa gelitaanka iyo soo -saaridda gaaska oksaydh -ka -samayska (habka hawo -qaadista);
Nadiifinta kulaylka oo qalalan Alaabta baakaduhu waa inay u adkeyso heerkul sare oo ah 160 ℃ -204 ℃ gudaha 2-3 saacadood iyada oo aan dhalaalin, gubanin ama falcelin kale;
Qalabka baakadaha jeermis -dileynta ee Plasma waa inay u adkaystaan ​​faaruqin aad u daran, oo aysan nuugin wakiilada jeermiska, oo aysan saameynin wareegga jeermis -dhalinta, oo aysan waxyeello u geysan shayada la nadiifinayo.
Ka sokow xulashada qalabka baakadaha ku habboon, waa inaan sidoo kale fahannaa sida loo adeegsado alaabta baakadaha ee kor ku xusan si habboon si loo gaaro himilooyinka naqshadeynta gelitaanka jeermis -dilaha, caqabadaha aseptic -ka ah iyo furitaanka aseptic ee qalabka baakadaha.